NIDAAMKEE DOORANAYA: WINDOWS AMA LINUX - LINUX - 2020
Ugu Weyn Ee Linux
Nidaamka hawlgalka ee uu doorto: Windows ama Linux
Dad badan oo isticmaala codsiyo kala duwan si ay PC, laakiin ma aha had iyo jeer ka dib rakibidda bilawga guuleysta. Dhibaatadu waxay dhacdaa marar badan, oo mid ka mid ah waa inuu kubadda ku dhaco shaashadda iyada oo aan muuqan wax wargelin ah. Maanta waxaanu si faahfaahsan u sharxi doonaa dhammaan hababka la heli karo ee xalinta dhibaatadan. Waxay noqon doonaan kuwo faa'iido leh xaaladaha kala duwan, markaa waxaan ku talinaynaa in aan isku dayno dhammaantood, halkii aan ku noolaan laheyn mid gaar ah.
Waxaan sixi karnaa khaladaadka bilawga ciyaaraha macaamiisha ee Windows 7
Sababta dhibaatadu waxay noqon kartaa dhowr. Dhamaantood, hal dhinac ama mid kale, waxay la xiriiraan shaqada arji gaar ah ama nidaamka oo dhan. Waxaan kuugu soo jeedineynaa siyaabaha ugu wax ku oolsan ee inta badan keena natiijo wanaagsan. Aynu bilowno ugu fudud.
Ka hor inta aanad bilaabin tilmaamaha hoose, waxaanu kugula talinaynaa in aad is barbardhigto shuruudaha nidaamka ugu yar ee ciyaarta oo leh qalabkaaga si aad u hubiso in kombuyuutarkaagu uu si sax ah u taageerayo. Aqoonsiga qaybaha kombiyuutarada waa barnaamijyo gaar ah. Si aad u hesho liis dhamaystiran, arag maqaalkeena kale ee xiriiriyaha hoose.
Eeg sidoo kale: Barnaamijyada lagu go'aamiyo qalabka kombiyuutarka
Habka 1: Eeg qoraalka dhacdada
In Windows 7, waxaa jira qalab lagu dhisay "Aragtida Dhacdada". Waxaa jira diiwaangalinta dhammaan tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ka dhaca barnaamijyada caadiga ah iyo kuwa saddexaad. Ogeysiisyada iyo cilladaha khaladka ah ee halkaa jooga ayaa kaa caawin kara qeexida sababta ciyaarta ciyaarta oo hoos u dhacday. Sababtaas awgeed, waxaa habboon in la eego qoraalka dhacdooyinka ugu horreeya si loo go'aamiyo halka laga helay fashilka codsiga.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri: Tag galka dhacdada Windows 7
Ka dib markaad soo bandhigto liiska macluumaadka qaybta looga baahan yahay, waxaad u baahan tahay inaad hesho fariin qalad ah oo la xidhiidha arjiga hore loo bilaabay, iyo laba jeer guji khadka - tani waxay furi doontaa faahfaahinta. Sharaxaaddu waxay inta badan muujineysaa qawaaniinta ay xallintu ka raadineyso internetka.
Habka 2: Dib u soo celi ciyaarta
Waxaa macquul ah in wax qaldamay intii lagu guda jiray rakibidda ama casriyeynta ciyaarta, markaa shilku wuxuu dhacayaa isla markiiba ka dib markii isku day la doonayay. Waxaa ugu wanaagsan in laga saaro dhammaan feylka codsiga oo isku day inaad rakibtid markale, si taxadar leh u raac fariimaha ku qoran qalabka rakibay. Si aad u hesho faahfaahin faahfaahsan oo lagu rakibayo codsiyada ilo kala duwan, fiiri waxyaabaha kale ee hoos ku qoran.
Ku rakibidda ciyaarta ka soo dhejinta kombiyuutarka
Sida loo rakibo ciyaarta on Steam
Ku rakibida ciyaarta qalabka DAEMON
Habka 3: Nadiifinta Windows
Bilowga waxaa laga yaabaa in badan oo software ah saddexaad. Codsiyada noocan oo kale ah ma aha oo kaliya inay ku xirmaan OS, laakiin sidoo kale fuliyaan howlaha, sida soo dejinta iyo rakibidda cusbooneysiinta. Dhammaan tallaabooyinkani waxay saameyn karaan howlgalka ciyaarta, taas oo keenta duulista miiska. Waxaan kugula talineynaa in aad nadiifisid nidaamka nadiifinta nidaamka qalliinka iyo hubi haddii ay taasi caawineyso xalinta dhibaatada. Samee ficilada soo socda:
Ku shaqee korantada Orodhaysashada isku-dhafka muhiimka ah Win + R. Ku qor xariiqdamsconfig.exeoo guji "OK".
Daaqad ayaa furan "Nidaamka Nidaamka". Halkan waxaad u baahan tahay inaad dooratid tabarka "Guud"halkaas oo sax ku dhig shayga "Download download", la soco "Ku dheji waxyaabaha alaabtu bilaabayso"kadibna codso isbedelka.
U dhaqaaq qaybta "Adeegyada". Jooji bandhigga adeegyada Microsoft, jooji dhamaan hababka kale oo guji "Codso".
Dib u cusbooneysii kombuyuutarka oo hubi haddii dhibaatada codsiga uu ku dhacay shaashadda la dhigay.
Haddii taasi tani caawiso, waxaad si joogto ah u joojin kartaa adeegyada aan loo baahnayn iyo qaybaha bilowga ah. Talooyinka faahfaahsan ee ku saabsan sida loo sameeyo tan waxaa laga heli karaa maqaaladeenna kale ee xiriirinta hoose.
Adeegso adeegyada aan loo baahnayn ee Windows 7
Sida loo demiyo barnaamijyada autoloading ee Windows 7
Habka 4: Isku dayga nidaamka khaladaadka
Inta lagu jiro fadhiga OS-ga, waxyaallaha kala duwan iyo khaladaadka ayaa dhici kara, taasoo keenaysa dhibaatooyin kale oo ku saabsan codsiyada shaqsiga. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad hubisid Windows si aad u taxadarto faylasha nidaamka nidaamka. Tan waxaa sameeya barnaamijyada sadexaad ama dhismo-ku-dhisan. Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri maqaalkan soo socda.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri: Hubi daacadnimada faylasha nidaamka Windows 7
Habka 5aad: Hubi kombiyuutarkaaga fayraska
Faylasha qarsoon ee ku xayiran PC waxay leeyihiin saameyn kala duwan oo ku saabsan hawlgalka - waxay tirtirayaan ama beddelaan xogta, ka hortagaan barnaamijyada qaarkood, qaybaha qaybaha geedi socodka. Ficilada noocan oo kale ah waxay kicin karaan shil ciyaarta si miiska. Hubi kombiyuutarka si hanjabaad leh hab kasta oo habboon, ka dibna tirtir dhammaantood haddii wax laga helay. Marka la dhamaystiro nidaamkan, mar labaad codsiga u dhiib.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhri
Habka 6: Nadiifinta Diiwaangelinta
Faylasha ku-meel-gaarka ah iyo qashinka kale ee diiwaanka ayaa mararka qaar ka hortagaya in ciyaaraha si haboon u shaqeynayaan. Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood waxaa jira khaladaad keeni karta saameyn isku mid ah. Nadiifinta diiwaanka oo xaliyo dhibaatooyinka suurtagalka ah hab kasta oo habboon. Si aad u hesho faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan mawduucan, fiiri maqaaladaha hoose.
Sida loo nadiifiyo diiwaanka Windows ee khaladaadka
Nadiifinta Diiwaanka CCleaner
Habka 7: Isku dhejinta kaadhka fiidiyowga
Hawlgalka joogtada ah ee codsiyada waxaa mar walba hubiya kaararka fiidiyowga, sidaa daraadeed waa muhiim in ay si caadi ah u shaqeyso. Badanaa, qaladaad kala duwan waxaa sababay darawaliinta sawirada ama kuwa aan qaldanayn. Waxaan kugula talineynaa in aan akhrino maqaalkeena soo socda Iyaga ayaad ka heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo casriyeeyo barnaamijka loogu talagalay kaararka fiidiyowga.
Cusboonaysiinta darawallada kaararka NVIDIA video
Cusbooneysiinta Darawalnimada AMD Radeon Graphics Card
Waxa kale oo muhiim ah in adeeriyaal sawiradu sida caadiga ah u shaqeeyaan, ma kululaan, islamarkaana si deg deg ah wax looga qabto macluumaadka soo socda. Waxaad ka fiirin kartaa kaadhka fiidiyowga waxqabad siyaabo kala duwan, adigoo isticmaalaya barnaamijyada sadexaad ama qalabyada Windows-ka ah.
Hubinta Caafimaadka Kaarka Caafimaadka
Sidee loo fahamsan yahay kaarka gubtay ee gubtay
Nidaamka 8: Samee fayl garaysin
Faylka loo yaqaan 'Paging' waa mid ka mid ah xasuusiyooyinka sanadka ee kombuyuutarka. Waxay u wareegaysaa boqolkiiba boqol ee xogta ka timaadda RAM, taas oo xor u ah xusuusta jireed. Maadaama dhammaan kombiyuutarada oo dhan ay leeyihiin xaddi badan oo RAM, si ay u ordo si sax ah, waxaa laga yaabaa in lagama maarmaan noqoto in la abuuro fayl gareyn.
Abuuritaanka faylka qoritaanka kombiyuutarka leh Windows 7
Sidee loo bedelaa cabbirka faylasha daaqadaha ee daaqadaha 7
Haddii aad ka fekereyso cabbirka xajmiga, waxaan kugula talinaynaa inaad barato hagaha kale. Waxaa ku jira sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida si madaxbannaan loo go'aamiyo qadarka ugu fiican ee xasuusta sanadka.
Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri: Go'aaminta xaddiga saxda ah ee faylka dhegeysiga ee Windows
Habka 9: Hubi RAM
Codsiyada kombiyuutaradu waxay si aad ah u isticmaalaan RAM, si joogto ah u wareejinta iyo keydinta macluumaadka iyaga oo isticmaalaya. Qalabaynta qaybtan waxay saameyn kartaa waxqabadka ciyaarta, taasoo keenta burburka isla markiiba ka dib isku dayga lagu furayo. Sidaa daraadeed, waxaan kugula talinaynaa inaad tixraacato qoraalladayada kale ee xiriirinta hoose si aad u heshid tilmaamo lagu hubinayo iyo dayactiridda qaladaadka RAM.
Rakibidda RAM kombiyuutarka leh Windows 7
Sida loo hubiyo RAM ee waxqabadka
Habka 10: Hubi Disk Hard Disk
Mararka qaar qaladaadka nidaamka ku shaqeeya waxaa sabab u ah khaladaad ku jirta qalabka adag. Dhibaatada ugu weyn waa qaybo xun - qayb ka mid ah booska HDD, oo aan si sax ah u shaqeyn. Haddii dhaawaca uu saameyn ku yeeshay faylasha cayaaraha, waxay u horseedi kartaa sii deynta ciyaarta ee miiska. Waxaad u baahan tahay inaad tijaabiso naftaada adiga oo adeegsanaya qalab gaar ah, ogaanaya oo iskuday inaad hagaajisid dhibaatooyinka soo kordhay. Si aad u fahantid tan waxaad ka caawin doontaa walxaha shakhsiyeed boggayaga internetka.
Hubi qaladaadka qaladaadka ee Windows 7
Sidee loo hubiyaa nalka adag ee qaybaha xun?
Haddii aan mid ka mid ah hababka kor ku xusan wax natiijooyin ah, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto bogga rasmiga ah ee cayaaraha cayaaraha, u sheeg dhibaatada ka dhalatay iyo tallaabooyinka loo qaaday si loo tirtiro. Inta badan, waxaad heli doontaa tilmaamo dheeraad ah oo kaa caawin doona xalinta dhibaatadan.
https://termotools.com so.termotools.com © Linux 2020